आफ्नो मोबाइल र सिक्री बन्ध;की रा,खेर पनि शव जलाएको छुः सपना (भिडियो सहित कुराकानी ) – Ap Nepal
आफ्नो मोबाइल र सिक्री बन्ध;की रा,खेर पनि शव जलाएको छुः सपना (भिडियो सहित कुराकानी )
बीबीसीको सय प्रभावशाली महिलाको सूचीमा पर्नुभयो, कस्तो अनुभव भइरहेको छ? – एकदमै खुसी लागेको छ। मैले सोचेको पनि थिईन्। विश्वका सय महिलामध्ये म पनि पर्न सफल भएछु। एकदमै उत्साहित छु। यो सम्पूर्ण टिमको सफलता हो। हामीले विगतदेखि गर्दै आएको कामको मूल्याङ्कन गरेर यो स्तरसम्म पुर्‍याउन सहयोग गरेको छ, बीबीसीले। यसका लागि धन्यवाद दिन चाहन्छु।
कसरी छनोटमा परे जस्तो लाग्छ? – केही समय अगाडी बीबीसीमा कार्यरत कमल परियार र रमा पराजुलीले ‘बहिनी तिम्रो काम राम्रो छ’ भन्दै मेरो काम बारे रिपोर्ट बनाउनुभएको थियो। अनि सम्पूर्ण मिडियाकर्मी दाईदिदीहरूले मेरो समाचार बनाउनुभएको थियो।
कुन माध्यमबाट आफू छनोट भएको जानकारी प्राप्त गर्नुभयो? – यो खबर औपचारिक रूपमा मैले बिहान १० बजेतिर थाहा पाए। सञ्चारकर्मी सोनु लिम्बु र अनुप दाईले फोन गरेर बधाई छ बहिनी भन्नुभयो। मैले के को बधाई दाई भनेर सोधे। दाईहरूले बीबीसीको सय प्रभावशाली महिलाको सूचीमा परेको कुरा अवगत गराउनुभयो। फेसबु्क खोले। अनि बल्ल थाहा भयो।
यो खुशीलाई कसरी सेयर गर्नुहुन्छ ? – मलाई जतिले सपना भनेर चिन्नुहुन्छ, सबैलाई धन्यवाद दिन चाहान्छु। मेरो आफ्नो कारणले मात्र होइन, मलाई हौसला दिनुहुने सम्पूर्ण मिडियाकर्मीले देखाउनु भएकोले हो। खासमा राज्यले बेवारिसे शवको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हो। तर, हामीले आफ्नो बलबुताले सकेसम्म गर्यौं। राज्यले सहयोग नगरिरहेको अवस्थामा हाम्रो कामको मुल्याङ्कन गर्दै मलाई पनि प्रभावशाली महिलाको सूचीमा छनौट गरियो। एकदमै खुसी लागेको छ। सम्मानसँगै सामाजिक उत्तरदायित्व बढेको महसुस गरेको छु।
कत्तिको बधाईको ओइरो लागेको छ? – एकदमै बधाई आइरहेको छ। फोन रिसिभ गर्न, म्यासेजको रिप्लाई दिन भ्याइरहेको छैन। एकदमै ब्यस्त बनाएको छ। सबैलाई एकमुस्ट धन्यवाद दिन चाहन्छु।
समाजसेवामा आउने प्रेरणा कसरी मिल्यो ? – छोटो समय भएपनि सडकमा जीवन बिताएको मान्छे भएको हुनाले सडक जीवनको पिडा थाहा छ। सडक जीवनका दुःखले मानिसको भोगाइले मलाई समाजसेवामा आउने प्रेरणा मिल्यो। काठमाडौंमा विनयजंग बस्नेतसँग भेट भयो। म उहाँलाई बुवा मान्छु। उहाँ वेवारिसे शवहरू दाहसंस्कार गर्नुहुन्छ। म उहाँबाट समाजसेवामा आउन प्रेरित भए।
काम गर्दा कत्तिको समस्याहरु भोग्नु पर्‍यो? – समस्या धेरै छन्, १८ सय रुपैयाँ शुल्क दाखिला गरेपछि शव जलाउन मात्र १०–१२ हजार खर्च लाग्छ। मैले आफैले लगाएको सुनको सिक्रीदेखि मोबाइलसम्म बन्धकी राखेर पनि बेवारिसे शव जलाउन खर्च जुटाएको छु। हालसम्म मैले सयभन्दा बढी लाशको दाहसंस्कार गरेको छु।
अबको योजना के छन्? – मेरो आगामी योजना अध्ययनसँगै समाजसेवालाई निरन्तरता दिनेछु। समाजका लागि केही राम्रो काम गरूभन्ने लाग्छ।
अध्ययन कहाँ पुग्यो? – ‘प्लस टु’ सके। अब ब्याचलर ज्वाइन गर्दैछु।
समाजसेवा गर्दै मान्छे राजनीतिमा आउँछन्, तपाईको सोच के छ नि? – राजनीति आफैमा गलत होइन। राजनीतिमा हुनेले फोहोरी खेल खेलेका छन्। राजनीति बारे खासै मलाई थाहा छैन। समाजसेवालाई नै निरन्तरता दिने हो। राजनीति बारे सोचेको छैन र यसमा आउँदिन पनि।-स्कटनेपालबाट
Prevआज पैसा पठाउदै हुनुन्छ ? हेर्नुहोस आज यस्तो छ बिदेशी मुद्राको भाउ
Nextरमेश र कल्पनालाई विवाहबारे सो,ध्दा, कल्पनाको यस्तो ज,वाफ (भि,डियो सहित)
शा’स्त्रका अनुसार बिहान देखिएका यस्ता पाँच चिजले तपाईको दिन शु:भ रहन्छ..
२ बर्षपछि अनिता बो, ल्नसक्ने भएपछि बिनोदको आँखा आँ:सुले भरिए, अन्जली अधिकारी पुग्दा गलबन्दी गीत गाएर चकित पा,रिन (भिडियो सहित)
हेर्नु’होस् आठ लाख लगा’नीमा, ५० लाख क’ माई गर्ने यो गीत (भिडियो सहित)
बलिउडलाई टक्कर दिने नेपालीको भिडियो ‘सिक्किम जाने रेल’ !-हेर्नुहोस (भिडियो सहित) (19332)
तपाँई बिहानै खाली पेटमा चिया पिउँ;नुहुन्छ ? एकपटक अवस्य पढ्नुहोस तपाँईलाई यस्तो हुनपनि सक्छ !… (7031)
७० बर्षका श्रीमान २० बर्षीय श्रीमतीको जोडी टिक-टकमा यसरी रम्दै सिरियलमा खेल्न अफर(भिडियो सहित) (6973)
६ बर्ष पहिले म,रेको मान्छेको चि,हान राति १२ बजे यसरी खनेका थिए, चि,हान खन्दाको दृश्य (भिडियो सहित) (6877)
तपाईंले चलाई रहेको सिमकार्ड कसको नाममा दर्ता छ ? आजै यसरी चेक गर्नुहोस् म (5041)
एटिएमबाट पैसा झिक्दै हुनुन्छ ? माघ १ गतेदेखि बन्यो यस्तो नियम (4583)
गरिब, दु:खीको हिरो शिशिर भण्डारीको ‘अन्तिम भा:ईटिका’ ! ३ करोड नेपालीलाई रु, वाउने (भिडियो सहित) (3596)
नायिका श्वेता र विजयन्द्रको जोडी टिक’टकमा रम्दै, भिडियो बन्यो भाई’ रल [हेर्नु;होस् भिडियो] (3397)